Get Chance သီတင်းကျွတ်ဈေးရောင်းပွဲတော် - amazingyangon
Home /Event, Promotion/Get Chance သီတင်းကျွတ်ဈေးရောင်းပွဲတော်
Corner of Pyay & Hledan Road, Kamayut Township, Yangon 11041
Get Chance သီတင်းကျွတ်ဈေးရောင်းပွဲတော် မှကြိုဆိုပါတယ်
ဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုတော့ ရန်​ကုန်​မြို့ရဲ့ အချက်​အချာကျပြီး လူဝင်​လူထွက်​များ​သော ??လှည်းတန်းစင်​တာ ပရိုမိုးရှင်းဧရိယာမှာ ၁၀ လပိုင်း ၁ ရက်​​နေ့(တနင်္ဂ​နွေ​နေ့)မှာ ကျင်းပသွားပါမယ်..?????
???ဖျော်​​ဖြေ​ရေးအစီအစဉ်​​ပေါင်းများစွာနှင့်​ တင်​ဆက်​သွားမှာဖြစ်​ပြီး ????Game ​လေး​တွေ​ဆော့ရင်းနဲ့ နိုင်​တဲ့ကူပွန်​​လေး​တွေနှင့်​ Shwe Wang မှာ Hotpot သွားစားကြရ​အောင်​????
????သီတင်းကျွတ်​မှာ လူကြီးမိဘ​တွေကို ကန်​​တော့ဖို့ လက်​​ဆောင်​၀ယ်​ချင်​တဲ့ ​ဘော်​​ဘော်​တို့နှင့်​ သီတင်းကျွတ်​မှာချစ်​သူနဲ့လျောက်​သွားမယ့်​ မမ ​လေး​တွေအတွက်​??? Cosmectics Brand များ၊ ????Fashion စိတ်​၀င်​စား တဲ့ ညီငယ်​ညီမငယ်​တို့အတွက်​ တ​နေရာတည်းမှာ​ဈေးဝယ်​ထွက်​ရင်း ​Game ​လေး​တွေလာ​ဆော့ဖို့ ဖိတ်​​ခေါ်ပါရ​စေ​နော်​။​
?‍???ဖျော်​​ဖြေ​ရေးအစီအစဉ်​​တွေအ​နေနဲ့ အိမ်​မက်​ဆုံရာမှ အဆို​တော်​များ၊ ????Dancer ​လေးများ၏ ကကွက်​ဆန်းများ ၊ ?‍♂️?‍♀️?မျက်​လှည့်​ဆရာများ၏ စိတ်​လှုပ်​ရှားစရာမျက်​လှည့်​များ၊Model ​Show အပြင်​ Game အစီအစဉ်​​လေး​တွေပါ ပါဝင်​တဲ့အတွက်​ဆက်​ဆက်​လာခဲ့ဖို့ မ​မေ့နဲ့​နော်??
?​ပွဲ​လေးအား စိတ်​၀င်​စားပြီး ​ဈေး​ရောင်းချမယ့်​​ကောင်​တာများအ​နေဖြင့်​လည်း ပါဝင်​ဖို့ ကမ်းလှမ်းပါရ​စေ☺️☺️
စိတ်​၀င်​စားပါကဆက်​သွယ်​ရန်​ .. 09 420091360,09 451183324,0942513540 ကိုဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါတယ်​။
ဒီအစီအစဉ်​အပြင်​ Laptop , Printer, Handset များ Free ကံစမ်းနိုင်​မယ့်​ Website တခုအားလဲမိတ်​ဆက်​​ပေးသွားမှာဖြစ်​ပါတယ်​​နော်​။